i-shp - iGeofumadas
Shintsha idatha yendawo ku-inthanethi!
I-MyGeodata iyisevisi emangalisayo ye-intanethi lapho kungenzeka khona ukuguqula idatha ye-geospatial, enefomethi ehlukile ye-CAD, GIS ne-Raster, iye ohlelweni oluhlukile lokuphrojusa nokubhekisisa. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulayishe ifayela, noma ukhombise i-url yalapho ligcinwe khona. Amafayela angalayishwa ngamunye ngamunye, noma ...
Geospatial - GIS, kokuqala
I-CAST - Isoftware yamahhala yokuhlaziywa kobugebengu
Ukutholakala kwamaphethini ezindawo ezehlakalo zobugebengu nezindlela okwenzeka ngazo kuyinto ethinta noma imuphi uMbuso noma uhulumeni wasekhaya. I-CAST igama lesoftware yamahhala, ama-initials we-Crime Analytics for Space - Time, eyethulwa ngo-2013 njengesisombululo somthombo ovulekile sokuhlaziywa kwe-actuary, ngamaphethini ...
Indlela yokuvula, ilebula, futhi uhambise ifayela le .shp nge-Microstation V8i
Kulesi sihloko sizobona ukuthi singavula kanjani, sibahlele futhi sibhale ifayili le-shp sisebenzisa iMicrostation V8i, okufanayo kusebenza neBentley Map. Yize kungamafayela asendulo angama-16-bit, amadala njengamanye-amaningi- wezimpunga zami, akunakugwenywa ukuthi aqhubeke nokusetshenziswa kumongo wethu we-geospatial. Vele, lezi zindlela ziyasebenza ezintweni ezihlanganisiwe zevector ...
Isiguquli samahhala se-inthanethi sedatha ye-GIS - CAD neRaster
I-MyGeodata Converter iyisevisi ye-Intanethi eyenza ukuguqulwa kwedatha kube phakathi kwamafomethi ahlukile. Okwamanje insizakalo ibona amafomethi wokufaka we-vector angama-22: I-ESRI Shapefile Arc / Info Binary Coverage Arc / Info .E00 (ASCII) Coverage Microstation DGN (Version 7) MapInfo File Comma Separated Value (.csv) GML GPX KML GeoJSON UK .NTF SDTS Ubalo lwabantu baseMelika ...
CartoDB, okungcono ukudala amamephu inthanethi
I-CartoDB ingenye yezicelo ezithakazelisa kakhulu ezenzelwe ukudala amamephu anemibala e-inthanethi ngesikhathi esifushane kakhulu. Kubekwe ku-PostGIS nasePostgreSQL, okulungele ukusetshenziswa, kungenye yezinto ezinhle engizibonile ... nokuthi kuyisinyathelo esivela kwimvelaphi yaseSpain, kungeza inani. Amafomethi asekelayo Ngoba kungukuthuthuka okugxile ...
Geospatial - GIS, Innovations, Inthanethi kanye Amabhulogi
Ukunciphisa, ukubiza okuphansi kwe-GPS cm
Lo mkhiqizo usanda kwethulwa engqungqutheleni yabasebenzisi be-ESRI eSpain, ngeviki eledlule nakulokhu okulandelayo bazoba seTopCart eMadrid. Luhlelo lwe-GPS lokubeka nokulinganisa olusekela ukucubungulwa kwangemuva, lapho kungatholwa khona imininingwane yesentimitha. Akukho lutho abanye abangakwenzi ...
I-ArcGIS Plugin ye-AutoCAD ESRI ikhiphe ithuluzi lokubona ngeso lengqondo idatha ye-ArcGIS evela kwa-AutoCAD, elenga njengethebhu entsha ku-Ribbon futhi akudingekile ukuba nelayisense ye-ArcGIS noma uhlelo lufakwe. Isebenza ngezinguqulo ze-AutoCAD 2010 kuya ku-AutoCAD 2012, abakashongo lutho nge-AutoCAD ...
Unyaka uqale ngamandla amakhulu yizinkampani ezinikele endaweni yoqeqesho, sisebenzisa lesi sihloko ukukhuthaza okunye okusha okukhona kulolu daba, futhi ngenhlanhla sinikeza ukuqhubeka komkhiqizo, wobani wakhe ebesikhuluma ngaye kusukela ngonyaka odlule; ngokombono wethu uhlukile ...
NgoJuni 2011, izinhlobo ezintsha zesoftware esetshenziswe kwimishini ye-Ashtech zakhishwa, ngakho-ke lapho uthenga imishini emisha, lezi zinguqulo ngeke nakanjani zifakwe. Ngisebenzisa lesi sihloko ukukhombisa ukuthi zingalandwa kuphi, kanye nezici ezintsha sha zalesi sibuyekezo: Endabeni ye ...
IZonum Solutions yisiza esinikeza amathuluzi akhiqizwe ngumfundi wase-University of Arizona, othe ngesikhathi sakhe sokuphumula wanikela ngezihloko zekhodi ezihlobene namathuluzi we-CAD, ukwenza imephu nobunjiniyela, ikakhulukazi ngamafayela we-kml. Mhlawumbe obekuthandwa ukuthi banikelwa mahhala, futhi yize ...
Cartografia, -Google Earth / Amamephu, GPS / Izinsiza kusebenza, Ubunginiyela
Ukwandiswa kwedolobha, isihloko se-2011
Udaba lwabantu luzoba semfashini kulo nyaka - nakulandelayo - ngoba akukuningi okumele kwenziwe ukulungisa izixazululo emhlabeni jikelele. Ukugxila kulo nyaka kwiNational Geographics yibo kanye abantu bomhlaba ngosuku olwandulela ukuguqulela kwizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa. Umagazini kaJanuwari ungowokuqoqwa kwabaqoqi. I…
I-ArcView Google Earth KML shp
Cartografia, -Google Earth / Amamephu, Innovations
Njengoba Mapserver usebenza
Ngesikhathi sokugcina sikhulume ngezindlela ezithile zokuthi kungani iMapServer nezisekelo zokufakwa. Manje ake sibheke okunye kokusebenza kwayo ekuzivocavoca namamephu wabangane baseChiapas. Lapho ungafaka khona Uma i-Apache isifakiwe, umkhombandlela wokushicilela okuzenzakalelayo weMapServer yifolda ye-OSGeo4W ngqo ngenhla C: / Ngaphakathi, kukhona ...
Google Earth GIS ezininginingi mapserver shp
Kokuthunyelwe kokugcina besikhuluma ngemininingwane elandiwe kumakhompyutha kaMagellan, futhi lapho kuvela isidingo sokucacisa ngezinhlobo ezahlukahlukene zeHhovisi leMobileMapper Office. I-MobileMapper 6 Office Lesi isiqeshana sesoftware esiza lapho uthenga i-MobileMapper 6, yisoftware entsha, engahambi ngohlobo lwe-1.01.01 ...
Geospatial - GIS, GPS / Izinsiza kusebenza
Sengikhiphile la mathoyizi ngaphandle kwebhokisi, ngesonto sizokwenza uqeqesho ukubona ukuthi asebenza kanjani. Okwamanje, sengiwabone kanzima amavidiyo nezinye zezimpawu zawo. Abanduleli bePrarkark 3. Ngomqondo ofanayo, phambilini bekunabokugcina: I-Mobile Mapper Pro, ithoyizi elihle ebeliseduze ...